1. Ekeresimesi, oge ọ joụ nke njedebe nke afọ mgbe oge oyi na-abanye n'ime. Taa, anyị nwere menu eji megharịa ọnụ. Nke ahu g’enyere ezinulo anyi huru n’anya obi uto, obi uto na obi uto. Nwere ike ite ezi na ụlọ ya dum Iji mepụta ikuku mara mma na ncheta, gbakwunye mfe ịme, ụtọ ụtọ na ịkwadebe ngwa ọrụ. A na-ahụkarị ya na nnukwu ụlọ ahịa nwere usoro ịme chocolate na-agbawa agbawa, ihe ndị dị mfe ma na-atọ ụtọ Iko 1 dị njikere, ka anyị jiri bọmbụ chọkọletị na-ekpo ọkụ gawa.
2. Ghichaa chocolate na obere okpomọkụ site na otuto. A ga-agbaji ya ma ọ bụ bee n'ime obere iberibe iji mee ka chocolate gbazee ngwa ngwa.
3. Kwadebe ihe nkedo silicone, griiz 1 gburugburu nke butter ma ọ bụ mmanụ oliv na-enweghị mmanụ, wụsa sie chocolate na ebu. Ma tinye n'ime friji maka ihe dịka 10 nkeji iji kwe ka chocolate dị jụụ n'ime cubes ma kpụzie dị ka ebu anyị họọrọ. A na-ejikarị ya dị ka mbipụta okirikiri. Maka na inwere ike itinye iko ma hu okirikiri okirikiri
4. Mgbe chocolate dị na udi Wepu ma friji. Mgbe ahụ wepụta ebu, hichapụ ma tinye chocolate ma gaa n'ihu ruo mgbe ego zuru ezu.
5. Mgbe chocolate siri ike Nweta nọmba na-eju afọ Tinye marshmallow n'etiti. Mgbe ahụ, sandwich elu na ala chocolate Mechie agbawa agba gburugburu na ihe fọdụrụ na chocolate. Kpụrụ n'ime ọdịdị mara mma Ma tinye ya na friji ọzọ, dị mfe na nke kachasị mkpa, ụmụaka ahụ hụrụ n'anya ma na-enwe obi ụtọ na mmemme ha na ezinụlọ ha na-eme, n'ezie, dị mkpa etu esi esi bọmbụ chocolate dị ọkụ n'ụzọ dị mfe, onye ọ bụla nwere ike ime ya, mana usoro ahụ agabeghị. Ka anyị lelee otu esi eri ya ka ị gbakwunye ụtọ na ikpo ọkụ n'oge ekeresimesi na nke afọ ọhụrụ a.
6. Otu esi eri bọmbụ chocolate dị ọkụ
7. Kwadebe ọmarịcha iko mara mma nke buru ibu karịa bọmbụ chocolate anyị kwadebere. Oburu n’inweta ekeresimesi Gbalịa ịhọrọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ, ọbara ọbara na-acha ọkụ, ma ọ bụ iko nwere akara nke ememme ahụ. Mgbe ahụ, sie mmiri ara ehi ọhụụ na obere ọkụ, na-akpali ruo mgbe mmiri ara ehi malitere ọnwa, anwụrụ ọkụ na-ese n'elu. Wunye mmiri ara ehi na-ekpo ọkụ n'ime iko nke bọmbụ chocolate. Mmiri ara ehi na-esi ísì ụtọ na-atọ ụtọ na ụtọ nke chocolate. Mgbe ị na-eri ngaji Marshmallows ga - egosiputa uto uto. Na adụ na chewy uto Na-enye mmetụ obi n’okwu niile
8. Onyinye kachasị mma bụ ịhụnanya, ịhụnanya, na ọnụnọ ezinụlọ. Nwee obi ụtọ na-emekọ ọnụ n'oge ezumike Na-eme ncheta na-esi isi ụtọ Otu esi eme ka mgbawa chocolate dị ọkụ Iji mee ka oge obi ụtọ dekọọ ogologo oge o kwere omume